Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2018 |
Misehoa! Zarao ny fandresen-dahatrao!
2018-10-25 @ 00:05 in Politika
Dimy volana nanoratana tamin'ny fiandohan'ity taona ity... dia tsy hita indray dimy volana manaraka izay. Nanao tsidi-pahitra ihany tsindraindray nefa misy ny fotoana maniry indrindra ny hanoratra indray saingy tsy mety tafa. Tena mila finiavana be vao mahasoratra. Fa fotoam-pifidianana isika izao ka misy ny tsy maintsy soratana ho fitadidiana, araka ny efa vakianareo mahazatra. Dieny aty am-piandohana dia mariho fa ny teny mahazatra antsika hoe propagandy dia soratako hoe fanentanana fa tsy fampielezan-kevitra.
Mila tadidiana ary fa tamin'ity taona ity, nisy fiovana filamatra ny fanentanana mialoha ny fotoana, afaka manao ny fanentanana goavana mialoha ny fotoana voafaritry ny lalàna sahady ny kandidà amin'ny fitetezana faritra, ary tena nitarika sy nanjakazaka tamin'izany toe-javatra izany Atoa Andry Nirina Rajoelina, filoha mpanorina ny vina IEM, tsy nanan-kambara loatra ireo rafitra tokony hifehy ny toe-draharaha fa ny hany re dia hoe rehefa tsy manao hoe "Fidio aho" na "Fidio Ranona" izy dia tsy mandika ny lalàna izy izay. Hany ka roboka ihany koa ny kandidà sasantsasany mba nitety faritra fa andeha atao hoe niasa mangina izy ireny fa tsy dia re loatra, tsy nanana haino aman-jery mpanohana mivantana manko.
Vao nanomboka izany ny fotoam-panentanana voafaritry ny lalàna dia niparitaka avy hatrany nanerana an'i Madagasikara ny t-shirt amin'ny loko laoranjy ahitana ny sarin'i ANR izay efa notononiko etsy ambony. Heverina ho very lavitra dia lavitra kosa ny hafa, saingy hay efa nisy ny niova famindra sy fomba fitaizana olona. Efa mahazatra tamin'ny andron'ny Arema ny loko mena midorehitra saingy tsy dia tena hoe betsaka no nitafy ireny fitafiana ireny. Nisantatra ny fizarana t-shirt ho an'olona maro dia maro kosa ny kandidà sady Ben'ny Tanànan'Antananarivo tamin'ny taona 2001. Nahatadidy mihitsy aho fa nisy hevi-dRatsiraka Didier Ignace (na mety ho avy amin'ny mpanohana azy) nampitaha ny hetsika TIM tamin'izany ho toy ny fanaon'ny Nazi tany Alemaina satria tena izaitratra ny isan'ireo t-shirt niparitaka ireo. Azo heverina ho mitovy tamin'izany ny fiparitaky ny t-shirt miloko laoranjy tamin'ity taona ity.
Ny tsikaritra hafa: nitobaka tokoa ny vola lanian'ny kandidà iray mandritra izao fotoam-panentanana izao, ny masoko mihitsy no nahita tao Anosimiarinimerina Avaradrano, teo anoloan'ny QG-n'io kandidà io ny vola nozaraina ho an'ireo nentina fiara hitety tanàna rehefa niandry fotoana maharitraritra tao anatin'ny hain'andro mingaingaina tamin'ny Asabotsy 20 oktobra 2018 lasa teo rehefa ho tolaka ny andro. Hita ihany koa fa saika goavana hatrany ireo karazana QG an'io kandidà io. Trano lehibe goavana azo atao Banky mihitsy ny QG etsy Ankadikely Ilafy raha efitrano kely iray ambony rihana kosa ny Foibem-panentanana an'ny TIM eo Ankadikely Ilafy ihany.
Tsikaritra ihany koa ny fitiavan'i ANR mamandrika fotoana hanaovana fandaharana manokana indray miaraka ho an'ireo fahitalavitra telo manana fantsona ao amin'ny Canal+ dia ny KoloTv, ny Viva ary ny TvPlus. Tadidinareo ve ilay fotoana manokana tamin'ny volana avrily niarahan'ny Depiote Mapar-Tim-MMM-Indépendants iny? Ilay nilazan'ny Depiote Guy Rivo Randrianarisoa voalohany iny fa hanao tatitra eo amin'ny tokotanin'ny Lapan'ny Tanàna ny depioten'Antananarivo e! Iny no notohizan'i ANR ka na izy sy ny mpanolotsainany no nandrafitra ilay hetsika 21 avrily 2018 na nahay nanararaotra ny fahazoana mampiaraka ireo fantsona miisa telo "misandrahaka" manerana an'i Madagasikara izy mba hampiely haingana ny vaovao avy aminy. Dia toy ny mahatsinjo ny valin'ilay fanontaniako tamin'izany aho hoe tompon-kevitra ve ny depiote TIM sa kofehy nanara-panjaitra tamin'iny hetsika iny.
Raha nirobaroba tamin'ny vola ary ny kandidà sasany dia toa zara raha nisy kosa ny t-shirt ho an'ny mpanohana an'i Marc Ravalomanana? Fa angaha tsy maharaka intsony ny vola? Saingy misy toe-tsaina amboarina ao ambadik'ilay fahavitsian'ny t-shirt, raha ny fijeriko manokana: Satria Marc Ravalomanana no nisantatra tamin'ny fanamaroana azy ho an-tapitrisany 17 taona lasa izay, dia te-hametraka kosa izy amin'ity taona ity fa tsy voatery zaraina t-shirt ny olona vao hifidy na hampandany anao. Taratasy kely nantsoiny hoe "Manifesto" na "fanomezan-toky (miisa 10)" indray no nezahiny hozaraina amin'ny olona sady nilazàny hoe tehirizo iny fa iny no hotanterahana raha vao lany aho. Nahita ny fahombiazany ve ny mpanohana an'i ANR fa dia mba lasa ihany koa ry zareo nametraka ny hoe "Velirano miisa 13" ifanaovan'ny kandidà amin'ny vahoaka.
Nahita ihany koa isika fa feno ny hiran'ny mpanohana an'i ANR na ny radio na ny fahitalavitra rehetra ankoatra ireo izay tsy mety handray azy ireny. Mahita ihany koa isika fa manokana ny dokambarotra any amin'ny faran'ny pejin'ny gazety maro ny mpanohana an'i ANR n°13 ankoatra ny gazetin'ireo mpanohana mivantana an'i n°25 na n°12. Mahita izany rehetra izany ny mpanohana an'i n°25 dia gaga fa tsy mba manokana pejy iray feno tahaka izany ny kandidà tohanany na dia any amin'ireo gazety malaza amin'ny fanohanana azy aza fa sarin-dRatsiraka n°21 indray aza no hita amin'izany. Dia velona ho azy ny fisantarana andraikitra avy amin'ireo olom-pirenena tsy manaiky ny ho resy tsy miady.
Fihaonana miavaka amin'ity fotoam-panentanana ity ny fanao isaky ny Asabotsy ao amin'ny kianjan'ny demaokrasia ao Ambohijatovo Antananarivo. Satria tsy misy ny fizarana t-shirt ho an'ny mpanohana dia ireo mpanohana indray no mifanangom-bola hanaovana izany ho azy ireo. Misy ny manjaitra ny akanjony manokana ho entina amin'izany fihaonana izany. Dingana iray hafa dia hafa tsy fahitan'ny teto teo aloha izany. Lasa misy isan-karazany sy mamoaka ny fahaiza-mamorona ao aminy ny tsirairay... tsy miandry tolorana toy ny hafa intsony. Efa mampiditra toe-tsaina olompirenena tompon'andraikitra izany fa tsy zary ho mpangataka lava izao. Koa na ho inona na ho inona voka-pifidianana dia efa manana tombony ny mpanohana an'i Marc Ravalomanana amin'ny fizorana mankany amin'izay maha-olompirenena tompon'andraikitra (sy ho mpitarika=leadership) izay.
Aiza ho aiza amin'izany toe-javatra izany kosa ary ny mpanoratra? Lazaiko anareo etoana fa tsy ao amin'ny Facebook ihany aho no lasa manentana fa eny an-kianja ihany koa. Teo am-piandrasana ny fandalovan'ny vadin'ny kandidà n°25 avy any Volonondry tamin'ny Talata lasa teo, raha toa lasa hira fotsiny no nandany ny fotoana fa tsy nisy loatra ny fandraisam-pitenenana dia nandray ny fanamafisam-peo aho ary nanao karazana fanentanana tamin'ny alalan'ny famakiana fotsiny ny Manifesto narahina fanazavana vitsivitsy, araka izay hita tamin'ny fahitalavitra ihany. Tsy menatra manoloana olona maro tsy fantatra intsony fa ny be ao an-tsaina dia hoe rehefa tsy izaho no hiteny dia iza indray? Dia izay no mahatonga ny lohatenin'ity paositra ity ho tahaka izao: Misehoa, zarao ny fandresen-dahatrao. Tsy voatery hanao ny tahaka ny nataoko mandray mikrô fa amin'ny fifampiresahana amin'ny olona fotsiny... mety hampisy zavatra ho azy izany, tsy voatery hifanasa vangy fa maneho tsotra fotsiny ny tsi-fitovian-kevitra rehefa sendra izany. Dia izay... Omena anao ny sehatra.